Inqanawa yokuqala yokuhamba ngenqanawa yokufumana ukutyunyuzwa komkhenkce
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukubambisa » Inqanawa yokuqala yokuhamba ngenqanawa yokufumana ukutyunyuzwa komkhenkce
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukubambisa • iindaba • Iindaba zaseNorway zokuPhula • Xanduva • uthutho
Julayi 11, 2019
I-MS-Roald Amundsen iyaqhubeka ukwenza imbali njengoko uHurtigruten wabhengeza umsitho wokuqala ukubizwa kweenqanawa e-Antarctica. Endaweni yebhotile yesiko le-champagne, ilifa lemveli lokuhlola ilizwe lika-MS Roald Amundsen liya kuzukiswa ngokunika inqanawa isiqwenga somkhenkce.
Umsitho wokuthiya amagama uza kwenzeka kolu kuwa njengoko inqanawa yokuqala yokuhamba ngenqanawa ehamba emhlabeni eya kwilizwekazi elimhlophe kuhambo lwayo lokuqala lwaseAntarctica.
Ayikho enye indawo engcono esinokuthi siyibize ngokuba yi-MS Roald Amundsen, kunamanzi aseAntarctica apho kungekho nqanawa yakha yabhaptizwa ngaphambili, utshilo u-CEO we-Hurtigruten uDaniel Skjeldam.
Ebizwa ngegama leqhawe le-polar uRoald Amundsen owayekhokele uhambo lokuqala lokudlula kwiPaseji eseMantla-ntshona, uhambo lokuqala oluya emazantsi, kunye nohambo lokuqala olubonakalise ukuba lufikelele eNorth Pole, umsitho wegama likaMS Roald Amundsen umiselwe ukuhlonipha ilifa lakhe isithethe esenziwe ngu-Amundsen ngokwakhe.
Xa wayebhaptiza inqanawa yakhe eyayisaziwa ngokuba yi "Maud" ngo-1917, uRoald Amundsen watshintshela kwibhotile yesampagne isuntswana lomkhenkce. Ngaphambi kokutyumza umkhenkce kwisaphetha sakhe, wathi:
Ayizonjongo zam ukungahloniphi umdiliya ozukileyo, kodwa ngoku sele uyifumene incasa yendawo ohleli kuyo. Kuba wakhiwe ngumkhenkce, kwaye uya kuhlala kuwo wonke ubomi bakho eqhweni, kwaye uya kuyisombulula imisebenzi yakho emkhenkceni. ”
I-Hurtigruten-kunye ne-godmother engekaziswa-baya kusebenzisa isithethe esifanayo xa betha i-MS Roald Amundsen.
Ukuhlonipha uRoald Amundsen kunye nelifa lakhe lokuhlola, isiko lakhe liya kuvuselelwa. Ngaphezulu kweminyaka engama-125 yamava ePolar, uHurtigruten uza kusebenzisa umsitho wokuqala wegama lokuthumela inqanawa e-Antarctica ukuhlawula ulwandle, indalo, kunye nabahloli bamazwe bangaphambili nabangoku, utshilo uSkjeldam.
I-Hurtigruten ene-hybridi-ene-MS Roald Amundsen yenza imbali yaselwandle ngokuba yeyokuqala ukuhamba ngenqanawa emhlabeni ukuhamba ngenqanawa ngamandla ebhetri njengoko yayishiya idilesi yaseKleven kuhambo lwayo lobuntombi kunxweme lwaseNorway ngasekupheleni kukaJuni.
Eyenzelwe ngokukodwa ukuphonononga awona manzi amangalisayo eplanethi, iMS Roald Amundsen ineempawu zobuchwephesha obuluqilima.
Inqanawa yokuhamba ngenqanawa esebenzisa amandla e-hybrid isebenzisa iipakethe zebhetri ukuxhasa iinjini zayo ezikhupha umoya omncinci kwaye iya kunciphisa ukukhutshwa kwe-CO2 ngaphezulu kweepesenti ezingama-20 xa kuthelekiswa nezinye iinqanawa zokuhamba ngenqanawa ezilingana nazo.
Oku kuvula isahluko esitsha kwimbali yaselwandle. I-MS Roald Amundsen yinqanawa yokuqala yokuhamba ngenqanawa exhotyiswe ngeebhetri, into ethathwa njengengenakwenzeka kwiminyaka nje embalwa eyadlulayo. Ngokwaziswa kwe-MS Roald Amundsen, i-Hurtigruten iseta imigangatho emitsha hayi eyokuhamba ngenqanawa kuphela, kodwa nayo yonke ishishini lokuhambisa eliza kulandela, utshilo uSkjeldam (ochazwe ngezantsi).
Indawo entle iya kubonakala kuyilo lweScandinavia lwangoku olunezinto ezisuka kwiziko lobuchwephesha beAmundsen Science, indawo enkulu yokujonga, iphuli engenasiphelo, i-panoramic sauna, iziko lempilo, iivenkile ezi-3, imivalo, i-Explorer Lounge, ii-suites ezijamelene ne-aft ngeebhafu ezishushu zangasese zangaphandle, kunye nomoya ohleliyo odala i-Hurtigruten ekhethekileyo ebhodini.
Ukusuka kwipali ukuya kwipali
Ixesha lentombazana le-MS Roald Amundsen liquka ukuhamba ngenqanawa kunxweme lwaseNorway ukuya eSvalbard naseGreenland ngaphambi kokuba ibe ngumkhombe wokuqala ohamba ngenqanawa ukuzama ukudlula kwiNgingqi eseMantla-Ntshona elandelayo emva kohambo oludumileyo lukaRoald Amundsen.
Ukongeza kuhambo lokuhamba ngononophelo lwe-eco-friendly kunxweme olusentshona loMntla noMzantsi Melika kunye neendawo zokuhamba ngeenqanawa ezinkulu azinakufikelela kwi-MS Roald Amundsen iya emazantsi asezantsi ixesha elipheleleyo le-2019/2020 ye-Antarctica.